Faallo: Xaal marin xilka Ra’iisul Wasaaraha
By admin on May 18, 2017 RA`YIGA, WARARKA
Xilka Ra’iisul Wasaaraha waa xilka ugu sareeya hay’adda fulinta, Dastuurka waxaa ku qoran inuu yahay Madaxa Xukuumadda Federaalka ah, wuxuuna xaq u leeyahay magacaabista iyo xil ka qaadista xubnaha Golaha Wasiirrada, horgeynta Golaha Shacabka xubnaha Golaha Wasiirrada iyo Barnaamijka xukuumadiisa si ay u siiyaan kalsooni. Waa hoggaanka siyaasadda iyo maamulka ee Golaha Wasiiradda. Ra’iisul Wasaaraha […]
Maxaa ka jira wararka sheegaya in Xasan Sheekh uu dhisaayo Kutlo cusub oo kasoo horjeeda Farmaajo
By admin on May 18, 2017 WARARKA
Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka heleyno ilo Diplumaasiyiin ka tirsan dowlada Federaalka ah ee Somalia ayaa sheegaya in Madaxweynhihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka Turkiga ka wado qorshooyin lid ku ah dowlada Federaalka. Ilo wareedka aan xogtaani la wadaagnay ayaa sheegaya in Madaxweynihii hore uu magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga […]
DEG DEG: Xildhibaanada Qaswadayaasha ku sugan Nairobi oo Mooshin u bedelay tabashadooda
Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa sheegaya in Xildhibaanada Mucaaradka Madasha Horusocod ay bilaaben diyaarinta Mooshin cusub. Wararku waxa ay sheegayaan in Xildhibaanadu ay isku afgarteen in Mooshinkaasi laga diyaariyo Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo oo ballanka uga baxay Xildhibaanada. Xildhibaanada qaar ayaa durba isku diiwaan galisay Mooshinka, halka qaarna la […]
Olole ka dhan ah Maamulka Axmed Madoobe oo ka socda dalka Australia
Warar soo baxaaya ayaa sheegaya in olole iyo Shirar Siyaasadeed ka dhan ah Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu ka socdo magaalada Melpon ee dalka Australia. Shirarkaani ayaa waxaa qeyb ka ah mas’uuliyiin iyo Siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay maamulka, waxa uuna ujeedka ololuhu yahay mid lagu cuuryaaminayo maamulka. Mas’uuliyiinta qeybta ka ah shirarka […]
Xildhibaanadii dhawaan ku shiray Kenya oo Maanta cadeynaya mowqifkooda
Guddoomiyaha Xildhibaanada mucaaradka Madasha Horusocod Xil. C/rashiid Xiddig ayaa lagu wadaa in maanta uu magaalada Muqdisho ka shaaciyo Mowqifka Xildhibaanada Madasha. Guddoomiyaha ayaa lagu wadaa in maanta uu warbaahinta kula hadlo magaalada Muqdisho si uu usoo bandhigo waxa uu yahay Mowqifka Xildhibaanada ku bahoobay Madasha. Xiddig ayaa sheegay in Mowqifkooda uu yahay mid cad, hadana […]
Erdogan iyo Donald Trump oo kawada hadlay Xasilinta xaalada Somalia
Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan ayaa booqasho ku jooga dalka Mareykanka gaar ahaan Washington. Tayyib Erdogan, ayaa kulan la qatay Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, waxa ayna kawada hadleen arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay Syria iyo Somalia. Erdogan, ayaa Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka dalbaday in dowladiisa ay ka qeybqaadato nabadeynta Somalia, waxa uuna […]
Kormer ay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ku tageen garoonka Aden Cadde, waxaa lagu ogaaday in isbadalka waaxda canshuuraha ee garoonka uu keenay faa’ido, waa sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda warfaafinta. Kormeerkan oo ku tageen Waaxda Canshuraha Garoonka Diyaradaha Aadan Cadde Wasiirka Wasaarada Warfaafinta iyo Hanuunita Dadweynaha Eng C/raxman Cumar Cusmaaan , Wasiir […]
Farmaajo ”Wakhti badan naguma qaadaneyso inaan shabaabka cashar taariikhi ah u dhigno”
Ra’isul wasaraha Ethiopia oo ka hadlay Dagaalka ay DFS la gali doonto Al-Qaacidada Somalia ee Alshabaab
Xog: Farmaajo oo safar degdeg ah ugu bixi doona wadamada deriska la ah Somalia
Madaxa WHO oo ka fiirsanaya go’aankii uu Robert Mugabe ugu magacaabay safiir sharafeedka hay’dda.
© 2017, ↑ XOGTA DAHSOON